Ogaden News Agency (ONA) – Guddiyada S.Ogadenya iyo Oromiya ee xerada qaxootiga Dhadhaab oo iskaashi ku balamay
Guddiyada S.Ogadenya iyo Oromiya ee xerada qaxootiga Dhadhaab oo iskaashi ku balamay
Maalintii isniinta ee ay taariikhdu kubeegnayd 16/12/13 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay kulan balaadhan oo ay kasoo qayb galeen gudiyada qoxootiga ee bulshooyinka Ogadenia iyo Oromia. Labada gudi ee labada qoomiyadood ka socotay ayaa kawada hadlay arimo dhowr ah oo dan u ah labada bulsho.
Waxaa kamid ahaa qodobadii ay kawada hadleen iskaashiga xaga arimaha qoxootiga, amniga, xoojinta wadashaqaynta iyo isku xidhka labada bulsho ee Ogadenia iyo Oromia.
Mar laga hadlayay amaanka ayaa la isla qiray muhiimada uu leeyahay amaanka iyo in lagawada shaqeeyo. Takale waxaa hoosta laga xariiqay in gumaysigii ay horaanba uga soo qaxeen uu uga dabayimid xeryaha ay qoxootiga ku yihiin isagoo isku dayaya in uu dhibaateeyo bulshada iyo isku-xidhnaantooda.
Dhanka iskaashiga markay ka hadlayeen labada guddi ayaa waxay sheegeen in uu xidhiidh soo jireen ah kadhaxeeyo labada umadood ee Oromada iyo S.Ogadenia xidhaadhkaas oo dhankasta ah waxayna kawada hadleen sidii loosii labanlaabi lahaa wadashaqaynta iyo iska warhayntuna ay u ahaan lahayd mid toos ah.
Gudoomiyaga gudiga qoxootiga Ogadenia mudane Cabdi Maxamad Gaaciye ( c/madoobe ) oo lahadlayay wakaalada wararka Ogadenia ONA ayaa sheegay in ay iyagu soo qabqaabiyeen kulankan islamarkaana ay u hirgashay dantii ay kalahaayeen oo ahayd hurumarinta xidhiidhka iyo danaha labada umadood wuxuuna gudoomiyuhu intaas kudaray in ay siiwadi doonaan xidhiidhka ay lasamaynayaan dadka qoxootiga ah ee kamad ah shucuubta ay Itoobiya gumaysato.
Guntii iyo gabagabadii labada gudi ayaa canbaareeyay falalka foosha xun ee ay dowlada gumaysiga Itoobiya kawado guud ahaan qoomiyadaha ay gumaysato gaar ahaan Ogadenia oo ay gumaad joogta ah kawado.